အ​သိ​ပေး​ချက်​နှင့် ​မေး​ခွန်း​နှင့်​အ​ဖြေ​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျွန်​တော့်​ဆီ​ကို ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​တဲ့​သူ​များ ​အား​လုံး​နီး​ပါး​ကို ​အ​ထူး​မှာ​ချင်​တာ​လေး ​တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ဘာ​လဲ​ဆို​ရင် ​ကို​ဖြစ်​နေ​တဲ့ ​ပြ​ဿ​နာ​ကို ​စာ​နဲ့​ပဲ ​မ​ပို့​ပဲ​နဲ့ ​ဖြစ်​နေ​တဲ့​ပုံ​လေး​ကို screen short ​ရိုက်​ပြီး​တော့ ​ပို့​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်. screen short ​ရိုက်​တာ ​လွယ်​လွယ်​လေး​ပါ. ​ဘာ​မှ​မ​ခက်​ပါ​ဘူး. ​မ​ရိုက်​တတ်​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် ​တစ်​ခါ​တည်း ​သင်​ပေး​လိုက်​ပါ့​မယ်. photoshop ​နဲ့​မှ screen short ​ရိုက်​လို့​ရ​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. paint ​နဲ့​လဲ screen short ​ရိုက်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. paint ​ဆို​တဲ့ program ​ဟာ window ​စ​တင်​က​တည်း​က ​ပါ​ထား​ပြီး​သား program ​ဖြစ်​လို့ ​လူ​တိုင်း​သိ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​ထင်​ပါ​တယ်. photoshop ​နဲ့​ကော paint ​နဲ့​ပါ screen short ​ရိုက်​နည်း​ကို ​ပြော​ပြ​ပေး​လိုက်​ပါ့​မယ် . ​နောက်​တစ်​ခါ​ဖြစ်​ရင်. ​ပုံ​လေး​တွေ​နဲ့ ​ပို့​ပေး​ပါ​လို့ ​မေ​တ္တာ​ရပ်​ခံ​ချင်​ပါ​တယ်.
Paint ​ဖြင့် screen short ​ရိုက်​နည်း
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး paint program ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ.
window7​မှာ​ဆို​ရင် start icon ​လေး​ရဲ့​အ​ထက်​မှာ search program and file ​ဆို​တာ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​ကွက်​ထဲ​မှာ paint ​ဆို​တဲ့ ​စာ​ကို ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​တာ​နဲ့ paint program ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. paint ​ကို​ဖွင့်​ထား​ပါ.
​ဖြစ်​နေ​တဲ့ error box ​ကို ​မြင်​ရ​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ Desktop ​သ​မား​များ​က keyboard ​မှာ Print Screen SysRq ​ဆို​တဲ့ ​စာ​သား​လေး​ရှိ​ပါ​တယ်. Scroll Lock ​ရှိ​တဲ့​အ​ကွက်​မှာ​ပဲ ​ရှိ​တတ်​ပါ​တယ်. ​အ​ဓိ​က ​က​တော့ screen ​ဆို​တဲ့ ​စာ​သား​ပါ​ပါ​လိမ့်​မယ်. Keyboard ​တစ်​မျိုး​နဲ့ ​တစ်​မျိုး ​ရေး​ထား​တာ​ချင်း ​မ​တူ​ညီ​လို့​ပါ. ​အဲ့​စာ​သား​ကို ​တစ်​ချက်​နှိပ်​လိုက်​ပါ. ​တစ်​ချက်​နဲ့ ​အား​မ​ရ​ရင် ​နှစ်​ချက်​နှိပ်​ပါ.
​ပြီး​တာ​နဲ့ paint program ​ကို ​ပြန်​သွား​ပါ။
ctrl + v (or) ​လွတ်​နေ​တဲ့ ​အ​ဖြူ​ရောင်​အ​ကွက်​မှာ right click ​ထောက်​ပြီး​တော့ paste ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​တာ​နဲ့ save (or) ctrl + s ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​အဲ့​ဒီ့​မှာ Save as type ​အ​ကွက်​မှာ (.png, .gif, .jpg) ​အဲ့​သုံး​မျိုး​ထဲ​က ​တစ်​မျိုး​မျိုး​ကို​ရွေး​ပြီး​တော့ ​သင့်​တော်​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ save ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
​ဒါ​ဟာ paint ​နဲ့ screen short ​ရိုက်​နည်း​ပါ. ​ပို့​ပေး​ရ​မှာ​လည်း​ပဲ ​အဲ့​ဒီ့​ပုံ​ပါ​ပဲ.
Adobe photoshop ​ဖြင့် screen short ​ရိုက်​နည်း
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး Adobe photoshop program ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ.
window7​မှာ​ဆို​ရင် start icon ​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ photoshop ​ဆို​တဲ့ program ​ကို ​စ​တွေ့​ပါ​လိမ့်​မယ်. Adobe photoshop program ​ကို​ဖွင့်​ထား​ပါ.
​ပြီး​တာ​နဲ့ Adobe photoshop program ​ကို ​ပြန်​သွား​ပါ။
ctrl + n (or) File >> new ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပြီး page setup ​ပေါ်​လာ​ရင် enter ​ခေါက်​လိုက်​ပါ ​ပြီး​ရင် ctrl + v (or) ​လွတ်​နေ​တဲ့ ​အ​ဖြူ​ရောင်​အ​ကွက်​မှာ right click ​ထောက်​ပြီး​တော့ paste ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​တာ​နဲ့ save (or) ctrl + s ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​အဲ့​ဒီ့​မှာ Save as type ​အ​ကွက်​မှာ (.png, .gif, .jpg) ​အဲ့​သုံး​မျိုး​ထဲ​က ​တစ်​မျိုး​မျိုး​ကို​ရွေး​ပြီး​တော့ ​သင့်​တော်​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ save ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
​ဒါ​ဟာ Adobe photoshop ​နဲ့ screen short ​ရိုက်​နည်း​ပါ. ​ပို့​ပေး​ရ​မှာ​လည်း​ပဲ ​အဲ့​ဒီ့​ပုံ​ပါ​ပဲ.
Laptop ​သ​မား​များ​အ​တွက်​က​တော့ ​အ​တို​ကောက်​အ​နေ​နဲ့ PRT SC SYSRQ ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ပါ​လာ​တတ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​လို​ပါ​လာ​တဲ့ ​ကီး​ကို ​နှိပ်​ရ​မှာ​ပါ. ​နှိပ်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ function key ​လို့​ခေါ်​တဲ့ FN ​ဆို​တဲ့ ​ကီး​ကို ​အ​ရင်​နှိပ်​ထား​ပြီး​မှ PRT SC SYSRQ ​ဆို​တဲ့ ​ကီး​ကို​နှိပ်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. FN + PRTSC SYSRQ ​ပါ​ပဲ. ​ဘာ​မှ​မ​ထူး​ပါ​ဘူး. ​လုပ်​နည်း​က ​အ​တူ​တူ​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​တော့ ​နောက်​ပြ​ဿ​နာ​လေး​များ​ဖြစ်​မယ်​ဆို​ရင် screen short ​လေး​ရိုက်​ပြီး​ပို့​ပေး​ကြ​ပါ. ​တစ်​ချို့​က ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​ကို ​ဝင်​ပြီး ​ကူ​ညီ​ပေး​မယ်​ဆို​တာ​နဲ့ ​ဆက်​ပြီး​တော့ ​စ​ကား​မ​ပြော​တော့​တဲ့ ​သူ​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​တော်​တော်​တော့ ​ရယ်​ရ​တယ်​ဗျ. ​အ​လုပ်​မ​အား​တဲ့​ကြား​က​နေ ​ကူ​ညီ​ပေး​မယ်​ဆို​တာ​တောင်. ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ ​ဝင်​မယ်​ဆို​တာ​နဲ့​တင် ​ဘာ​ကို​ကြောက်​တယ် ​မ​ဆို​နိုင်​ပါ​ဘူး. ​ရ​ပါ​ပြီ​အစ်​ကို ​ကျွန်​တော့်​ဟာ​ကျွန်​တော် ​လုပ်​လိုက်​ပါ​ဦး​မယ်​ဆို​ပြီး ​စ​ကား​မ​ဆက်​တော့​ပါ​ဘူး. ​ကဲ ​ကျွန်​တော် ​ဆို​လို​ချင်​တာ​က​တော့ ​ပုံ​လေး​တွေ​နဲ့ ​ပို့​ရင် ​နောက်​လူ​တွေ​လဲ ​သိ​အောင် ​ကျွန်​တော်​လဲ ​ဘာ error ​လဲ​ဆို​တာ​သိ​အောင်​လို့ ​သက်​သေ​သာ​ဓ​က​နဲ့ ​ဖြစ်​သွား​အောင်​လို့ ​ပို့​ခိုင်း​လိုက်​တာ​ပါ.
tarzan.villane09@gmail.comး​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော်​ကို kaspersky antiviurs 2012 keygen ​ကို download ​ဆွဲ​တာ​မ​ရ​လို့​ပါ​ခင်​ဗျာ ​အဲ​ဒါ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကျွန်​တော်​ကို ​အ​ကူ​ညီ​လေး​တစ်​ခု​လောက်​ပေး ​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ.. ​ကျေး​ဇူး ​တင်​ပါ​တယ်....
​ညီ​လေး​ရေ keygen ​လို့​တော့ ​တင်​ပေး​တာ ​မ​တွေ့​မိ​သေး​ပါ​ဘူး. ​တွေ့​ရင်​လည်း​ပဲ trojan ​နဲ့​ပေါင်း​ထား​တဲ့ program ​တစ်​ခု​လို့​ပဲ ​အစ်​ကို့​အ​နေ​နဲ့​တော့ ​ယူ​ဆ​မိ​ပါ​တယ်. ​အ​န္တ​ရယ်​အ​ကင်း​ဆုံး​နဲ့ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​ဖြစ်​တဲ့ key ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​အ​မြဲ​တမ်း update ​တင်​ပေး​နေ​တာ​ကို ​ဘာ့​ကြောင့် keygen ​ကို ​လို​ချင်​တာ​လဲ​ဆို​တာ​ကို​တော့ ​ကို​မ​သိ​ပါ​ဘူး. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ညီ​လို​ချင်​တဲ့ keygen ​ကို ​ရှာ​ပေး​လို့​ရ​ပါ​တယ်. window os ​ပါ ​ဒေါင်း​သွား​တာ​မျိုး virus ​ဝင်​သွား​တာ​မျိုး​ဆို​ရင်​တော့ ​အစ်​ကို​တာ​ဝန် ​မ​ယူ​နိုင်​ပါ​ဘူး. ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​အစ်​ကို့​ရှေ့​မှာ ​ရက်​ပေါင်း 3600 ​ကျော် crack ​တစ်​ခု​ကို ​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​က​နေ ​ရောင်း​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ကို​စစ်​ကြည့်​လိုက်​တော့ ​အ​ထဲ​မှာ trojan ​နဲ့​ပေါင်း​ပြီး virus ​အ​ဖြစ် ​ဖန်​တီး​ထား​တာ ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်. ​ထည့်​ပြီး​ပြီး​ချင်း​တော့ update ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​သေး​တယ်. 100% ​ပြည့်​သွား​လို့ window ​ကို restart ​တောင်း​လိုက်​လို့ ​ပေး​လိုက်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ window ​တက်​မ​လာ​တော့​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​ဒါ ​ကို့​ဆီ​ကို​လာ​တဲ့ customer ​တစ်​ယောက်​ရဲ့​အ​ဖြစ်​ပါ. ​ကို​တား​ပါ​သေး​တယ်. ​ညီ​လေး ၃ ​လ​ကျော် ၄ ​လ​လောက်​အ​ထိ ​အစ်​ကို​ရက်​ကို ​ရှာ​ပေး​ပြီး ​ထည့်​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ဒီ crack ​ကို​တော့ ​မ​ထည့်​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး​ဆို​တော့. ​ဆိုင်​က ​အစ်​ကို​က ​ရက်​ပေါင်း 3600 ​ကျော်​ရှိ​တယ်​လို့ ​အ​သေ​အ​ချာ​ပြော​လိုက်​ပါ​တယ်​အစ်​ကို ​ထည့်​သာ​ထည့်​လိုက်​ပါ​လို့​ပြော​ပါ​တယ်. ​တား​ပေ​မယ့် ​မ​ရ​တဲ့​အ​တွက် ​အဲ့​ဒီ့ crack ​ကို ​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ရက်​ပေါင်း 3600 ​ရ​ပြီး​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​သူ့​စက်​ကို ​ပြန်​ယူ​သွား​ပြီး ​နောက်​နေ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​ဝင်း​ဒိုး ​တက်​မ​လာ​တဲ့​အ​ကြောင့် ​လာ​ပြော​ပါ​တယ်. ​အ​စ​က​တည်း​က ​ဖြစ်​မယ်​ဆို​တာ​ကို​ကြို​သိ​လို့ ​တား​ပေ​မယ့် ​မ​ရ​တဲ့​အ​တွက် ​လုပ်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ. ​ကျွန်​တော့်​မှာ ​အ​ပြစ်​ကင်း​တယ်​လို့ ​ယူ​ဆ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သူ့​ကို ​သင်​ခန်း​စာ ​ရ​သွား​စေ​ချင်​တဲ့ ​သ​ဘော​ပါ​ပဲ. ​ကျွန်​တော် window ​အ​သစ်​ပြန်​တင်​ပေး​ပြီး ​အ​ကုန်​ပြန်​လုပ်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​တစ်​ပြား​မှ ​မ​ယူ​လိုက်​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​တော့ ​ဒီ​သင်​ခန်း​စာ​လေး​ကို ​ယူ​စေ​ချင်​ပါ​တယ်. ​မ​ယုံ​ရင် keygen ​ချည်း​ပဲ​သတ်​သတ် google ​က​နေ ​ရှာ​ကြည့်​လိုက်​ပါ. ​ဆိုက်​တော်​တော်​များ​များ​ဟာ kaspersky internet security ​က blacklist ​သတ်​မှတ်​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​တွေ ​ဖြစ်​နေ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
sanlinn March 13, 2012 at 8:12 AM
​ကျွန်​တော် ​အော်​ဇီ ​က​နေ​ပါ။ ​မို​ဘိုင်း ​ဟမ်း​ဖုန်း ( ​ဆို​နီ ​အဲ​ရစ်​ဆင် ​မော်​ဒယ် ​နှိမ့် )​မှာ ​အင်​တာ​နက်​ရ​တယ်။ ​အဲ​ဒါ​ကို ​လက်​တော့(Acer) ​နှင့်​သုံး​ချင်​တယ်။ ​ရ​မ​လား။ ​လမ်း​ညွန်​စေ​ချင်​တယ်။
naybright April 22, 2012 at 3:15 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ရေ ​ကျ​နော ​ကို​တစ်​ခု​လောက်​ကူ​ညီ​ပေး​လို.​ရ​မ​လား​မ​သိ​ဘူး.. ​ကျ​နော​ရဲ.​ပြ​ဿ​နာ​က​တော့ gtalk ​မှာ​ပါ။ ​ဒီ​လို​ပါ ​ကျ​နော unifi ​တပ်​ဆင်​ထား​တာ​မ​ကြာ​သေး​ပါ​ဘူး ​ကွန်​န​ရှင်​လည်း​အ​ပြည့်​ဘဲ .. ​သို.​ပေ​မယ့် gtalk ​က​နေ ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို ​ခေါ်​တာ ​ဘေး​က​ကွန်​န​ရှင်​ဘား​က ​လိုင်း​က​တက်​မ​လာ​ပါ​ဘူး ​ကျ​နော​ခေါ်​နေ​တဲ့​သူ​ငယ်​ချင်း​ဘက်​က​လည်း ​ကွန်​န​ရှင် ​က ​အ​ပြည့် ​ပါ​ဘဲ . ​တစ်​အိမ်​တည်း ​အ​သုံး​ပြု​နေ​တဲ့​သူ​ငယ်​ချင်း​ကို​တော့​ခေါ်​လို.​ရ​ပါ​တယ်.. ​စ​ကား​ပြော​လို.​ရ​ပါ​တယ်.. ​ဒီ​အ​ပြင်​ဘက်​က ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို​တော့​ခေါ်​လို.​မ​ရ​ဘူး (​ဆို​လို​တာ​က) ​ကျ​နော​ခေါ်​နေ​တာ​ကို ​ကြား​ရ​တယ် ​ပြန်​လက်​ခံ​ဖြေ​ပေး​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကွန်​န​ရှင်​ဘား​က​တက်​မ​လာ​တဲ့​အ​တွက် ​စ​ကား​ပြော​လို.​မ​ရ​ဘူး.. ​သူ​ဘက်​က​ခေါ်​ပြန်​တော့​လည်း ​ကျ​နော​က​ကြား​ရ​တယ် ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​တယ် ​ဒီ​အ​တိုင်း​ဘြဲ​ဖစ်​ပြန်​တယ်.. ​တစ်​အိမ်​တည်း​အ​သုံး​ပြု​နေ​တဲ့​သူ​ငယ်​ချင်း​က​တော့​ခေါ်​နေ​တာ​ကို​လက်​ခံ​လိုက်​ရင် ​ကွန်​န​ရှင်​ဘား​က​ချက်​ချင်း​တက်​လာ​တယ် ​စ​ကား​ပြော​လို.​ရ​တယ်.. ​အ​ကြမ်း​မျဉ်း​အား​ဖြင့်​ကျ​နော​တို.​သိ​ထား​တာ​က ​တ​ဖက်​ဖက်​က ​ကွန်​န​ရှင်​မ​ကောင်း​ရင် ​ဘား​က​တက်​မ​လာ​ဘူး ​စ​ကား​ပြော​လို. ​မ​ရ​ဘူး​လို.​ကျ​နော​သိ​ထား​ပါ​တယ်.. ​အဲ့​ဘယ်​လို​ကြောင့်​ဖြစ်​တာ​လဲ​မ​သိ​ဘူး​အ​ကို.. ​ကျ​နော​ရဲ. gtalk ​က​လား gmail​က​လား ​ဒါ​မ​မ​ဟုတ် ​ကွန်​န​ရှင်​ကြောင့်​လား ​အ​ကို ​ဒါ​မ ​မ​ဟုတ် ​စက်​ချွတ်​ယွင်း​မူ​ကြောင့်​လား​မ​သိ​ဘူး... ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​အ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျာ.. ​ကျေး​ဇူး​အ​ထူး​တင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ... naybright665@gmail.com ​ကျ​နော​ရဲ. gmail​လိပ်​စာ​ပါ...
Wanna May 9, 2012 at 11:14 AM
Virtual Private Server ​အ​ကြောင်း​မေး​ပါ​ရ​စေ... ​အင်​တာ​နက် ​ကွန်​နက်​ရှင် ​ဘယ်​လောက်​နှေး​နှေး VPS account ​တ​ခု​ရှိ​ထား​ရင် ​မြန်​နှုန်း​မြင့် ​သုံး​လို့​ရ​တယ်​လို့ ​သိ​ထား​ပါ​တယ်.. ​ကျွန်​တော်​သိ​ချင်​တာ​က ​အဲ့​လို​သုံး​တဲ့​အ​ခါ ​ကျွန်​တော့​ကွန်​ပျူ​တာ​က Terminal ​တ​ခု​လို​ပဲ​ဖြစ်​သွား​တာ​လား.. ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​ကွန်​ပျူ​တာ​တ​လုံး ​အ​နေ​နဲ့​ပဲ ​သုံး​လို့​ရ​ပါ​သ​လား.. ​ဆို​လို​တာ​က VPS account ​ကို​သုံး​ပြီး ​အင်​တာ​နက်​က​နေ ​ဒေါင်း​လုတ် ​ထား​တာ​တွေ​ကို ​ကျွန်​တော့်​ကိုယ်​ပိုင် ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​သိမ်း​လို့ ​ရ​ပါ​သ​လား.. ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် VP server ​မှာ​ပဲ ​သိမ်း​လို့​ရ​တာ​လား..
saw July 27, 2012 at 4:55 PM
​ကျ​နော်..​ပီး​ခဲ့​တဲ့​အ​ပတ်​က ​ကွန်​ပျူ​တာ​မြန်​အောင်​လုပ်​ဆောင်​နည်း​ဆို​တဲ့ ​စာ​ကို ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ​တွေ့​ပီး ​အဲ့​ဒီ​အ​တိုင်း​လျှောက်​လုပ်​လိုက်​တာ.. ​ရှိ​ရှိ​သ​မျှ software ​တွေ​ပါ​ဖျက်​မိ​လိုက်​တယ်​ထင်​ပါ​တယ်။ ​အ​ခု​တော့ ​စက်​က ​အင်​တာ​နက်​ကို ​ဘယ်​လို​မှ​ဖွင့်​မ​ရ​တော့​ဘူး​ဖြစ်​နေ​လို့.. ​ဘယ်​လို​ပြန်​လုပ်​ရ​မ​လဲ..​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး။
​ဒီ​ဆိုဒ်​က ​ကျ​နော် ​လုပ်​ချင်​တာ​တွေ ​အ​မြဲ​ရှာ​ဖွေ​ပီး ​စာ​ပါ​အ​တိုင်း ​လိုက်​လုပ်​လေ့​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​ကော်​မန့်​က​တော့ ​မ​ပေး​ဖြစ်​ပါ​ဘူး။ ​အ​မှား​ပါ​လျှင်​ခွင့်​လွှတ်​ပါ။
kaindara eain August 12, 2012 at 6:54 PM
​လေး​စား​လျှက် ​အ​ကူ​အ​ညီ​တစ်​ခု​တောင်း​ချင်​ပါ​တယ်။ ​မြေ​ပုံ​ဆွဲ​ဖို့ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​ဆော့​ဝဲလ်​နဲ့ ​အ​မြည်း​လေး​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။
​သ​လင်း October 7, 2012 at 7:29 PM
​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​အက်ို​ညီ​နေ​မင်း ​ရေ..​ကျွန်​တော်​က​တော့ ​အ​ကို​တို့​လို​နည်း​ပ​ညာ​သ​မား​တွေ ​ကို​အား​ကိုး​ပြီး..​စမ်း​တ​ဝါး​ဝါး​နဲ့ ​လေ့​လာ​ရင်း ​ဘ​လော့​လေး​တစ်​ခု​လုပ်​ထား​ပါ​တယ်.​အ​ကို့​ဆိုဒ်​ကို​လည်း​အ​မြဲ​လာ​လည်​နေ​ကျ​ပါ..​ခု​လို​နည်း​ပ​ညာ​လေး​တစ်​ခု​ရ​လိုက်​တာ​များ​စွာ​ဝမ်း​မြောက်​မိ​ပါ​တယ်။​အ​ကို​လည်း ​ထာ​ဝ​ရ​ပြုံး​ပျော် ​နေ​နိုင်​ပါ​စေ​နော်..​စေ​တ​နာ​အ​ရင်း​ခံ​တဲ့​အ​ကို​လို​လူ​မျိုး​ကို​ထား​ဝ​ရ​လေး​စား​လျက်​ပါ​ဗျာ။
laminlay December 25, 2012 at 9:03 PM
​အစ်​ကို ​ကျ​နော့်​ဖုန်း​က reboot ​ပြန်​မ​တက်​တော့​လို့​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး..sony ercisson ​လို့ ​ပဲ​ပေါ်​နေ​ပြီး ​ဘာ​မှ​အ​လုပ်​မ​လုပ်​တော့​ဘူး..ginger DX ​ကို ​က​လိ​လိုက်​လို့ ​ဖြစ်​သွား​တာ​ပါ။​ဖြေ​နည်း​လေး​များ​ရှိ​ရင် ​ပြော​ပေး​ပါ​အုံး​နော်။​ကျ​နော့်​ဖုန်း​မော်း​ဒယ်​က xperia x8​ပါ ​ခင်​ဗျာ။
Zaw Myo Naing June 4, 2014 at 12:48 PM
Adobe Cloud ​နှင့် ​ပတ်​သက်​သ​မျှ ​ဖြစ်​နိုင်​ရင်​တော့ ​အ​ကုန် ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျ။ ​ကျ​နော်​လည်း ​ရှာ​တော့ ​ရှာ​ကြည့်​ပါ​သေး​တယ်။ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​ပဲ ​များ​နေ​တော့ ​အ​ကို့​ဆီ​ကို ​အ​ကူ​ညီ ​တောင်း​ကြည့်​တာ​ပါ။ ​အ​ချိန်​မ​ရ​လို့ ​မ​အား​ဘူး​ဆို​ရင်​တော့​လည်း ​အား​တဲ့​အ​ချိန်​လေး​မှာ ​ဖြေ​ကြား​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျ။